June 2022 – SainPwar
SainPwar > 2022 > June
(၁၅) နှဈသမီး ရလိုကျတဲ့ ရညျးစားစာကို အမေ ရဲ့တုံ့ပွနျခကျြ (ဖတျကွညျ့ပါ အရမျးကောငျးပါတယျ သမီးရှငျတို့)
၁၅ နှစ်သမီး ရလိုက်တဲ့ ရည်းစားစာ ကို အမေရဲ့တုံ့ပြန်ချက် အရမ်းကောင်းပါတယ် သမီးရှင်တို့ သမီးက အသက် ( ၁၅ ) နစ်ပြည့်ခါစ( ၉ ) တန်းတက်ပါတယ်။ ခါတိုင်းဆိုရင် ကျောင်းဆင်းရင် တတွတ်တွတ်နဲ့ သူငယ်ချင်းများ အကြောင်း၊ အတန်းထဲကအကြောင်း၊ ဆရာဆရာမများအကြောင်း၊ သင်ခန်းစာအကြောင်း၊ သူဖတ်နေတဲ့ စာအုပ်များရဲ့ အကြောင်း ဘာကိစ္စပဲ ရှိရှိ၊ သမီးဖြစ်သူက မိခင်ကို ပြောပြလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုရက်ပိုင်းမှာ သမီးဖြစ်သူက ငိုင်ငိုင် ငိုင်ငိုင်နဲ့ တစ်ခုခုတော့ လွဲနေတယ်လို့ ...
FBသုံးတာ ဒီလိုပို့ဈမြိုးတှကွေောငျ့ ဘလျေကုနျရကြိုး နပျနတောပါ မကျြရညျခိုငျရငျတော့ ဖတျကွညျ့စခေငျြတယျ….
ဖတ်ကြည့်မှ……သိမှာမို့…..ဖတ်ကြည့်နော့် ဖတ်စေချင်လွန်းလို့ပါ……။ လင်မယား စုံတွဲတစ်တွဲပါလာတဲ့သင်္ဘောတစ်စင်း နစ်မြှုပ်သွားတယ်…။ အချိန်တော်တော်ကြာမှအသက်ကယ်လှေတစ်စင်းရောက်လာတယ်…။ အသက်ကယ်လှေပေါ်မှာ နေရာဆိုလို့တစ်နေရာဘဲ ကျန်တော့တယ်…။ အဲဒီအချိန်မှာ ယောက်ျားဖြစ်သူက သူ့မိန်းမကိုသူ့အနောက်ဆွဲချလိုက်ပြီး သူကိုယ်တိုင်အသက်ကယ်လှေပေါ်ခုံတက်လိုက်တယ်…။ အဲဒီ အမျိုးသမီး ကတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းနစ်မြှုပ်နေတဲ့သင်္ဘောပေါ်မှာရပ်ပြီးသူ့ယောက်ျားကို စကားတစ်ခွန်းအော်ပြောလိုက်တယ်…။ ဒီနေရာအထိပြောပြီးတော့ ဆရာမကကျောင်းသားတွေကို မေးလိုက်တယ်…။ “မင်းတို့ ခန့်မှန်းကြည့်…အမျိုးသမီးက ဘာအော်ပြောလိုက်သလဲ?” ကျောင်းသားတွေကတော့ အလုအယက်ဒေါနဲ့မောနဲ့ အော်ပြောကြတယ်…“ငါနင့်ကိုမုန်းတယ်… ငါကို ထားပစ်ရစ်ခဲ့တယ်… ” အဲဒီအချိန်မှာ ဆရာမကကျောင်းသူလေးတစ်ယောက်ကိုဘာမှမပြောတာကို သတိထားမိတော့ဆရာမက သူ့ကိုမေးလိုက်တယ်…။ အဲဒီကျောင်းသူလေးက ပြန်ဖြေလိုက်တယ်…“ဆရာမ… သမီး ထင်တယ်…။ အဲဒီ အမျိုးသမီးအော်ပြောလိုက်မှာက …ငါတို့ကလေးကို ...
ကံကောငျးစမေညျ့ ရှပွေ့ေး နိမိတျတှအေကွောငျး…
ကံကောင်းစေမည့် ရှေ့ပြေး နိမိတ်တွေအကြောင်း လူတစ်ယောက် ကံကောင်း လာတော့မယ် ဆိုတာကို ရှေ့ပြေးနိ မိတ်တွေကြည့်ပြီး သိရှိနိုင်ပါတယ်။ နိုင်ငံတိုင်း မှာတော့ ကံကောင်းခြင်းရဲ့ နိမိတ်ကင်္ကေတတွေ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အယူအဆ အမျိုးမျိုးရှိလို့ နေပါတယ် ။ အယူအဆအ မျိုးမျိုးထဲကမှ လူအများစု နားလည် လက်ခံယုံကြည်ထားတဲ့ ကံကောင်းခြင်းရဲ့ နိမိတ်သင်္ကေတတွေလည်း ရှိပါတယ်။ သင့်ဆီကို ကံကောင်းခြင်းတွေ မကြာခင် ရောက်ရှိလာတော့မယ် ဆိုရင် ဒီလိုရှေ့ပြေးနိမိတ် သင်္ကေတတွေကို မြင်တွေ့ ရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော် (1) ငှက်တွေ ...
ဖခင်တစ်ဦးက သူ့သမီးကို ဂိုဒေါင်ထဲမှာ ရပ်ထားတဲ့ ကားတစ်စီးကို ပြကာ ခုလိုပြောလိုက်ပါတယ်။ သမီးကျောင်းပြီးသွားလို့ ဂုဏ်ပြု လက်ဆောင်အဖြစ် ဒီကားကို ပေးမယ်။ သမီး မမွေးခင်ကတည်းက သမီးအတွက် ဆိုပြီး ဝယ်ထားခဲ့တာ။ တခါမှမသုံးပဲ သိမ်းပေးထား တယ်လို့ ဆိုပါတယ်… ဖခင်က သမီးရေ ကားကို အပိုင်မပေးခင် ဒီကား ဘယ်လောက်တန်လဲ သိရအောင် တစ်ပတ်နွမ်း ကားဈေးတန်းမှာ သွားပြကြည့်ပါ။ သူ့သမီးက တစ်ပတ်နွမ်း ကားဈေးတန်းမှာ သွားပြပြီး အဖေရေ သူတို့က ဒေါ်လာ တစ်ထောင် ပေးမယ် ...
ဗေဒင်လက္ခဏာ ဆရာကြီးတစ်ဦး ပြောပြတဲ့ သူဌေးဖြစ်မယ့်သူရဲ့ လက်ပုံစံ လူအများစုသည် လက်ဝါးပြတ်ဆိုလျင်အင်မတန်ကြောက် အင်မတန်ရှောင်ကြ၏။ဘယ်လောက်ထိကြုံခဲ့ဖူးလဲဆိုရင်…သူ့သမီးနှင့်ယူမည့်လူ အားလုံးခေါင်းငြိမ့်သဘောတူပြီးမှ လက်ဝါးပြတ်ဖြစ်နေ၍ခါးခါးသီးသီးငြင်းလိုက်တာမျိုးလက္ခဏာ ဗေဒင်ဟောသက် ၂၂ နှစ်ကျော်အတွင်း သုံးလေးဦးကြုံဖူးပါသည်။ယခုလက္ခဏာရှင်သည် လက်ဝါးပြတ်ဖြစ်၏။ပထမအရွယ်မကုန်သေးအသက်ငယ်သေး၏။သို့သော်ချမ်းသာ၏။ပြီးခဲ့တဲ့သုံးလေးရက်ကဤပုဂ္ဂိုလ်ကိုဟောဖို့အလှည့်ရောက်၏။မန္တလေးမြို့ကြီးကဖြစ်၏။ (၁) အနီရောင်ဖြင့်ပြထားသော လက်ဝါးပြတ်ဖြစ်နေသော်လည်း လက်မသည်လက်မတင်းပုတ် ပုတိုတိုလက်မမျိုးမဟုတ်သောကြောင့် လက်ဝါးပြတ်ဟုမသတ်မှတ်ပါ။ (၂) ထိုလက်ဝါးပြတ်သည် အနက်ရောင်ဖြင့် ဆွဲပြထားသောစိန်သရဖူအကြီးစားဖြင့် အတူတွဲဖြစ်နေခြင်း အဝါရောင်ဖြင့်ဆွဲပြထားသော အောင်မြင်ကျော်ကြားလမ်းကြောင်း ပါနေခြင်းတို့ကြောင့် လက်ဝါးပြတ်မဟုတ်ကြောင်း ထပ်၍ သက်သေပြနေပြန်၏။ (၃) လက်သူကြွယ်အောက်တွင် အဖြူရောင်ဖြင့် ဆွဲပြထားသောအလံတိုင် သင်္ကေတအဝါရောင်ဖြင့် ဆွဲပြထားသောတြိဂံ ၂ ထပ်နှင့် ...
တိုကျနဲ့ပဲ နနေေ၊ တဲနဲ့ပဲနနေေ ဒါတှေ လုံးဝ မလုပျမိကွပါစနေဲ့…
တိုက်နဲ့ပဲ နေနေ၊ တဲနဲ့ပဲနေနေ ဒါတွေ လုံးဝ မလုပ်မိကြပါစေနဲ့… စာမမှနျပါက အောကျတှငျ Unicode Version ဖွငျ့ဖတျရနျ လူတိုင်း လူတိုင်း အိမ်မှာ ဒါမျိုးတွေ လုံးဝ မလုပ်မိကြပါစေနဲ့နော် …။ (တန်ဖိုးရှိတဲ့ သိမှတ်စရာတွေပါ) အိမ်၌မပြုသင့်မထားသင့်သော ရှောင်ရန်များ သင်သိပြီးရင် မျှဝေပေးခဲ့ဖို့ မမေ့ပါနဲ့အုံး …။ ၁။ အိမ်ရှေ့၌ ငှက်ပျေားပင် မစိုက်အပ် …။ ၂။ ရေစိုအဝတ်များကို ညအချိန်သစ်ပင်ပေါ် အဝတ်တန်းပေါ် မထားရ …။ ၃။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ အပြောဆို ...
အောကျတှငျ Unicode ဖွငျ့ဖတျနိုငျပါသညျ။ ဘုန်းကြီး နဲ့ ခွေး မငတ်သေးဘူး (ခေတ်ပျက်ခြင်း/မပျက်ခြင်း နိမိတ်များ) ကြက်တွေ အိပ်တန်းမမှန်တော့ရင်။ကျီးတွေ ညပိုင်းအော်ဟစ်ဆူညံကြရင်။ခွေးတွေ နေ့/ည အူသံပေးရင်။သေချာပီ ခေတ်ပျက်မယ်ဆိုတဲ့ နိမိတ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသတိထားမိကြရဲ့လား ? ကြက်တွေ အိပ်တန်းမှန်နေသေးရင်ကျီးတွေ အရုဏ်မတက်ခင်မှာအသံကြားနေရရင်ခွေးတွေ နေ့/ညရက်ဆက်အူသံမကြားရရင်ခေတ်ဆိုတာမပျက်သေးဆိုတဲ့ နိမိတ်ပဲ။ ဒါကိုရှေးပညာရှိတွေက ခေတ်ပျက်ခြင်းနိမိတ် [ ၃ ]မျိုးဆိုပြီး ကဗျာလေးစီထားခဲ့ကြပြန်တယ်။ ရော – ခွေး၊ ဒု – ကြက်၊ ဝဂ် – သတ်၊ တဲ့ ရော ...
Unicode အသားလှုပျ၊လကျဝဲ လကျယာမဟုတျသော အသားလှုပျနိမိတျ အဟောမြား ၁။ ကြောကုနျးလှုပျမူ အဝတျရမညျ။ ၂။ ကိုယျလှုပျမူ မယားနှငျ့အတူ စကားဆိုရမညျ။ ၃။ ခါးလှုပျမူ ဥစ်စာပြောကျမညျ။ ၄။ ခကျြလှုပျမူ နှဈလိုဖှယျသော ဥစ်စာ ရမညျ။ ၅။ထိပျလှုပျမူ မငျးပူဇျောခံရမညျ။ ၆။ နှာခေါငျးလှုပျမူ ခဈြသူမြားမညျ။ ၇။ နှလုံးသားလှုပျမူ ခငျပှနျးကောငျးတဈယောကျ ဥစ်စာပေးလာမညျ။ ၈။ မေးဖြားလှုပျမူ အခငျြးမြားမညျ။ ၉။ လညျပငျးလှုပျမူ တနျဆာဆငျရမညျ ၁၀။ အထကျနှုတျခနျးလှုပျမူ ရနျဖွဈမညျ။ ၁၁။ အောကျနှုတျခနျးလှုပျမူ ...